Wararka - Bandhiggu aad ayuu muhiim ugu yahay shirkadeena
Carwadu aad ayey muhiim ugu tahay shirkadeena.Waxaan kaqeyb galnaa carwada ku dhawaad ​​sanad kasta. Halkan waa mid kamid ah bandhigyada aan kusoo biirnay.
Waxaan ku jirnaa Batimat 4 ~ 8, Nofeembar, 2019
BATIMAT, oo ah carwo naqshad dhismeedka labadii sanoba mar lagu qabto magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa waxaa soo qabanqaabiyey kooxda The Reed Exhibitions Group oo iyadu si guul leh u qabatey 30 bandhig ilaa 1959kii.
Isla mar ahaantaana, Interclima + Elec, bandhigga caalamiga ah ee kululaynta, qaboojiyaha, qaboojiyaha, New Energy iyo korontada guriga, iyo Ideo Bain, oo ah bandhigga caalamiga ah ee ku saabsan tuubooyinka iyo fayadhowrka ee Paris, Faransiiska, ayaa isu keenay dhammaan warshadaha dhismaha. dhacdooyinka dhismaha ee ugu weyn adduunka isla waqtigaas.
Maaddaama ay tahay barxad gaar ah, Batimat waxay soo bandhigeysaa waxyaabo kala duwan, qalab, teknoolojiyad qalab, xalal iyo adeegyo.Warba warshadaha ayaa la kulmi kara baahiyaha ka jira Batimat.
Bandhigu wuxuu u keenayaa fursado qaas ah kuwa wax soo bandhigaya inay la xiriiraan macaamiil aad u tiro badan, inay helaan macaamiil suurtagal ah, soo bandhigaan qibradooda isla markaana muujiyaan guulahooda hal abuurka leh
BATIMAT waxay ujeedadeedu tahay inay daboosho baahiyaha dhismaha iyo warshadaha dhismaha jawi dhaqaale oo adag oo leh qayb cusub oo waab ah. Ujeeddadeedu waa inay u keento booqdayaal badan bandhig-bixiyeyaasha, ha noqdaan shirkadaha waaweyn ama kuwa yaryar, shirkadaha bilowga ah ama ganacsiyada qoysaska, waxayna dhiirrigeliyaan horumarka ganacsiga Dhacdadan caalamiga ah waxay fursad cusub oo ganacsi u horseedaysaa warshadaha kala duwan ee Faransiiska iyo adduunka oo dhan, si loogu adeego hawlo kala duwan iyo xeeladaha suuqgeynta ee shirkadaha kala duwan.
Soojiidasho xoog leh: Paris, carwada naqshadaha faransiiska BATIMAT sidoo kale waxay siisaa qaab cusub oo bandhig ah: iibsadayaasha VIP iyo / ama dhagaystayaasha hadaf ahaan, maalgashiga ugu yar, xalka guud, soo jiidashada macaamiil badan iyo / ama macaamiil macquul ah dhagaystayaasha, muujinta xalalka dhaqaale iyo kuwa wax ku oolka ah si loo hagaajiyo muuqaalka wax soo saarka, looga gudbo dhibaatada dhaqaale iyo sidoo kale xalka lagu kicin karo kobaca dhaqaalaha, fursado badan oo ganacsi.
Bandhigan, waxaan la kulanay saaxiibo hore oo aan sameysanay saaxib cusub.Waxaan keeneynaa badeecadeena tayo sare leh si loo muujiyo. Inta badan badeecadeena waxaa lagu soo dhaweynayaa bandhiggan .Hope si aan kulakula kulmo bandhigga soo socda.